Warshadaha porno waxay sameeyaan sawirro xariif ah Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Sharciga Warshadaha porno
Wershadaha lebiska ayaa leh kharashka dunida oo dhan tobanaan billions of dollars sanadkiiba. Way adagtahay in la soo saaro tiro sax ah maaddaama aysan jirin daraasado dhowaan la isku halleyn karo, laakiin waa warshad weyn. Inta badan lebbiska internetka waxaa lagu sameeyaa deegaan aan sharci ahayn. Waxay badanaa muujisaa waxqabadyo khatar badan u leh caafimaadka. Tusaale ahaan waxaa jira isticmaalka ballaaran ee "khatarta," taas oo ah, galmada dabaysha oo aan lahayn cinjir. HIV weli waa mid ka mid ah cudurrada ugu dhimashada badan ee adduunka, lambarka darajada 2 ee liiska cudurrada faafa ah ee Ururka Caafimaadka Adduunka. 2014 waxa ay dileen dadka ku nool 1.4 million.
Inta badan pornography oo heterosexual u muujinaysaa galmada ah oo ah qalad ah, rabshad iyo qasab. Waxay had iyo jeer ku jirtaa muuqaalka dhabta ah ama kufsiga iyo mararka qaarkood waxay muujinaysaa khiyaano. Muuqaaladan naxdinta leh waxay soo bandhigaan riyooyin aad u sareeya maskaxda. Sawirrada mar hore la arko lama ogaan karo. Qalabkani ma aha mid adag in la helo. Waxay si gaar ah culeys u tahay dadka dhalinyarada ah ee ku soo warramay boggaga bogsashada ee sawiradaasi ay sababi karaan mudo dheer, kabacdi raaxo ah.
Waxyaabaha aadka u naxsani waxay ka dhigan tahay dopamine in ay hurdaan iyagoo doonaya inay mar kale soo noqdaan. Tani waxay maskaxda ku haysaa maskaxda waqti kadibna waxay u horseedi kartaa kabuubis shucuur leh. Cilmi baaris ayaa muujinaysa in dhalinyaradu ay daawadaan heerarka sare ee porno internetka ay leeyihiin waxyeello hooseeya ee rabshadaha waddooyinka oo aysan yarayn in ay soo farageliyaan.
Sharciga aasaasiga ah ee dhaqaalaha ayaa ah in haddii dalabku jiro, waxaa jiri doona qalab. Dabeecada khatarta ah ee ficil-galinta internetka micnaheedu waa in rabitaanka websaydhka internetka uu sii wadi doono sii kordhinta. Sida daroogada daroogada waxay u baahan tahay wax ka badan walax si aad u hesho garaacid, sidaa daraadeed sidoo kale qaylo-dheriyayaashu waxay u baahan yihiin cusbital, xoojin iyo kala duwanaansho si ay u helaan hagaajintooda ayna ka fogaadaan fashilka aan fiicnayn ee ka soo baxa dareenka. Iyadoo loo dulqaadanayo hal heer oo maadi ah ma sii dhalinayso saameyn, dalbashada waxyaabo badan oo naxdin leh ayaa sii wadi doona. Wershadaha luuqda ayaa si aad ah ugu faraxsan inay bixiyaan.
Download a video ku saabsan sida ey u shaqeyneyso warshadaha.
<< Kacsiga Dembiyada Webcam Wasmada >>